Nahoana no Traveling By Train no Friendly tontolo iainana | Save A Train
Home > Nandeha lamasinina > Nahoana no Traveling By Train no Friendly tontolo iainana
rail fitaterana tontolo iainana no tena fomba-namana mba handeha. Ny vokatry ny entona mandatsa-dranomaso entona isaky ny kilometatra eo amin'ny lalamby fitaterana dia 80% latsaky ny fiara. Any amin'ny tany sasany, latsaky ny 3% rehetra fitaterana famoahana entona mandatsa-dranomaso avy amin'ny fiaran-dalamby. Ny hany fomba sariaka kokoa ny tontolo iainana noho ny fiaran-dalamby mandeha sy bisikileta. Ery dia maro ny antony mahatonga misafidy ny mandeha lamasinina dia sariaka tontolo iainana ary te hizara izany aminao!
Ny mahazatra dia afaka mitondra tsipika fiaran-dalamby 50,000 ny olona isaky ny ora. Ampitahao izany amin'ny freeway làlan, izay afaka mihetsika ihany 2,500 ny olona isaky ny ora.
Lahatsoratra iray nozarain'i Nigel C Williamson (@therealnigelcw)
Rehefa mifanohitra amin'ny fiarandalamby fitaterana moto, vidiny ivelany, tabataba, fahalotoan'ny rivotra, loza, sy ny foto-drafitr'asa fahasimban'ny, ary ny fitohanana dia ambany lavitra amin'ny fiaran-dalamby noho ny fampiasana fiara manokana.
Noise fandotoana – Nahoana no misafidy ny mandeha lamasinina dia sariaka tontolo iainana
Ny fandotoana ny tabataba dia fiatraikany ratsy amin'ny olona sy biby. Izany dia vokatry ny mahantra mivantana planning an-drenivohitra. Olana avy amin'ny tabataba ny fandotoana daty miverina any Roma fahiny! ankehitriny, tabataba loto avy amin'ny fiara Mety hahatonga fahavoazana ara-tsaina ny olona ny fanjakana. Ahitana soritr'aretina fiakaran'ny tosidrà, avo-stress haavon'ny, tinnitus, matory korontana, sy ny zavatra hafa mampidi-doza vokatry.
Amin'izao fotoana izao, misy fepetra ny mametra ny fiantraikan'ny lalana feo. Anisan'ny fepetra tabataba sakana, mametra ny hafainganam-pandeha fiara, niova lalana mihasimba, ary koa ny fanaraha-maso ny fifamoivoizana hanampy malama fiara mikoriana. Midika izany fa ny fiara ao amin'ny rafitra fanaraha-maso ny fifamoivoizana dia mila mampiasa ny freins, ary tsy haingana.
Ny fiaran-dalamby dia sariaka sy tontolo iainana izay mitsikera. India no mahita varotra ny fiara tsy mitsaha-mitombo isan-taona eo amin'ny fototra. Shina dia mialoha ny manana 300 tapitrisa fiara teny an-dalana avy 2030. Aviation sy ny sambo mandeha ihany koa ny manampy ny famoahana entona CO2 manerantany. Toa avy tany rehetra ny fombafomba fitaterana, ireo lamasinina ihany no mihazona ny fivoahana ambany ary maharitra ho an'ny ho avy.
Fiara elektrika sy ny Hybrid dia mazava ho azy fa tsara kokoa ny tontolo iainana noho ny nentim-paharazana fiara, fa ny olana amin'izao fotoana izao dia ireo fiara lafo loatra tokony hamidy amin'ny ambaratonga izay mampifandanja ny voka-dratsy ny fiara.
Diesel fiarandalamby sy ny herinaratra fiarandalamby
Misy fahasamihafana eo amin'ny Diesel fiarandalamby ary elektrika fiarandalamby. Electric fiarandalamby ataon-drizareo 20-35% karbaona kely noho ny lamasinina diesel. Ny fiaran-dalamby dia sariaka tontolo iainana indrindra Electric fiarandalamby izay Powered by angovo azo havaozina sy ny tolotra karbaona-maimaim-poana nandehanany. entona avy fiaran-dalamby in Europe dia hampihena ny fanampiny 50% ny 2030. Ireo isa ireo satria lehibe ny fiaran-dalamby kaonty 8.5% rehetra Travel asa.
Lahatsoratra iray nozarain'i Dave Wheeler (@davewheelerstudio)
Lamasinina na fiaramanidina – Nahoana no misafidy ny mandeha lamasinina dia sariaka tontolo iainana
Zava-dehibe iray lehibe rehefa mampitaha fiarandalamby ny fiaramanidina dia ny hoe mila mampiasa fiaramanidina tsy mampino ny habetsahan'ny solika ho an'ny fiaramanidina sy ny fipetrahana. koa, rehefa mandeha fiaramanidina, dia mitady ho lasa ho any amin'ny seranam-piaramanidina ny fiara. Izany dia manampy amin'ny famoahana entona CO2 ho any amin'ny halehany. Izany no mahatonga naka ny intercity fiaran-dalamby ny tsy-brainer ho an'ny tontolo iainana.
Nisy ny sasany fivoaran'ny toe-draharaha vao haingana, indrindra ho an'ny olona nandeha ny raharaham-barotra izay nilaza ny Travel mpiasan'ny ny karbaona fiantraikan'ny ny sidina. koa, ankoatra ny tontolo iainana, tena sarotra izany mahatratra ny ivon-tanàna amin'ny fiara, kosa, raha amin'ny fiaran-dalamby, manana fahafahana miditra mivantana amin'ny Metropolitan foibem. izany, matetika kokoa noho ny tsy, ihany koa dia midika izay haingana be ny nandeha lamasinina noho ny fomba hafa.
Raha fintinina, ny lamasinina iray dia sariaka amin'ny tontolo iainana ary ny fomba fitetezana ny tontolo iainana indrindra ary koa manome fahafaha-miaina ho an'ny olona mandeha amin'ny raharaham-barotra sy ny fahafinaretana. Ny fitomboan'ny fiara teny an-dalana dia midika fa ny fitohanana sy ny fandotoana eo amin'ny vokatra sy ny fiaran-dalamby no fitaterana valiny mba hiarovana ny tontolo iainana.
No tadiavinao mba hividy tapakila lamasinina tsy misy saram famandrihana? Mandeha www.saveatrain.com mba hahazoana fahafahana hahazo ny mora indrindra tahan'ny fiaran-dalamby.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwhy-choosing-to-travel-by-train-is-environmentally-friendly%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml ary afaka hanova ny en taty na izany sy ny maro hafa fiteny.
#elektrika tontolo iainana Train Travel Travel